Wokutanga Wenyika Chekutanga Robhoti muAustralia | RayHaber
mushaTHE WORLDOCEANIA61 AustraliaYotanga Yenzira Yokutanga Robot muAustralia
Yotanga Yenzira Yokutanga Robot muAustralia
05 / 01 / 2019 61 Australia, THE WORLD, Railway, GENERAL, musoro wenyaya, OCEANIA
dunyanin kutanga koti robot muAustralia
MuAustralia, kambani yemigodhi yemigodhi, Rio Tinto, yakatanga nzvimbo yakazara yakagadzirwa nesimbi nebhokisi rakakura guru renyika.
Nzira yemotokari muPilbara, Western Australia, ine urefu hwemakiromita e800. Terei dzinotanga rwendo rwemaawa akawanda, kusanganisira kutakura nekudzikinura zvinhu zvekutakura. Mutauriri wekambani akati nyika ino ndiyo yekutanga munyika.
Uyu mugwagwa, nyika yekutanga yekuchengetedza zvakanyanya-inorema-inoshandisa mutengesi wenzira, iri pamusoro weiyo 940 mamiriyoni epurojekiti. Zvitima zvakagadzirirwa zvizere zvekugadzirisa software zvinoshandiswa kutakura mitambo yepistern.
Kudzidzira-kutya teknolojia ichaonekwa munzvimbo dzakawanda munguva yemberi. Kudzidzira-kutya motokari ikozvino ndiyo imwe yenyanzvi dzinozivikanwa zvikuru. Nekuwedzera kwekugadzirwa kwekombiyuta iyi, motokari dzakasiyana-siyana dzakadai sezvikepe zvisina kutya uye ndege isina kutya inogona kuonekwa.
Australia, 40 Granville chitima njodzi yıl
29 Munhu Akakuvadzwa akabatanidzwa nemamori muAustralia
Thales Australia Sydney Subway Subway Yakawedzera…
Bursa Teleferik Inc., iyo yakachengeteka yekutakura motokari yemotokari
Mutambo Wakareba Pasi Pose Car
Wenyika Chechipiri, Turkey kwakaita gore rokutanga 142 Subway Tunnel
8 yenyika. isu tiri nyika inogadzira mheni yekugadzira drilling machine
Üsküdar-Çekmeköy Metro ichava yakanyanya kupfuura mazuva ano munyika
10 Inotyisa Munyika Yose Train
Minister Leo "Turkey ndiyo nyika avhiyesheni nomusimboti ...
Nyika Inokurumidza Kunyanya Nyika muAiration…
China Inovandudza 350 Km Speeding Auto Train Per Hour